OsoteMapping | Otu esi ebelata nchekasị n'ebe ọrụ ngwakọ
Cheryl Cran Na-esote a
Gbalịa Usoro Ahụ n'efu
oru buu igba n'ulo
Ndi nkuzi anyi
Usoro NextMapping ™
Ọmụmụ ihe online
Ihe Omume na Ndụ
Ndepụta ndị ahịa
Ndị Na - eme Nzukọ
Ọzụzụ Ntanetị Ọhụrụ
Etu aga-esi mepụta ma mepụta ya n’oge ọsọ nke mgbanwe
Hụ Ọmụmụ Ọrụ Ọzụzụ Ndị Ọrụ N'ịntanetị ọ bụla
NextMapping™ Ọdịnihu nke Ọrụ Blog
Nabata na blog nke Ọrụ nke Ọdịnihu - nke a bụ ebe ị ga - ahụ akwụkwọ mmado na ihe niile metụtara ọdịnihu ọrụ.
Anyị nwere ndị na-ede blọgụ ọbịa nke gụnyere CIO, Behavioral Scientists, nke CEO, Data Scientists gụnyere akwụkwọ site na onye guzobere Cheryl Cran.
Lee niile blog post
Otu esi ebelata nchekasị n'ebe ọrụ ngwakọ
Ọ bụrụ na ọ dị otu ihe dị n'uche ndị ọrụ - ọkachasị ndị isi, ọ bụ otu a ga -esi belata nchekasị n'ebe ọrụ ngwakọ.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na -eme atụmatụ ịlaghachi azụmaahịa maka ndị ọrụ ha malite na Ọktoba 2021.
Ụdị ngwakọ anyị na -ahụ ka ọ na -adịkarị ugbu a bụ 'ụzọ ọrụ na -agbanwe agbanwe'.
A haziri usoro ọrụ na -agbanwe agbanwe ka ndị ọrụ wee nọrọ n'ọfịs ụbọchị 2 -3 n'izu yana ndị ọrụ niile nọrọ n'otu n'ime ụbọchị 2 ruo 3 ahụ. ụbọchị 2 fọdụrụ dị maka ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Na mgbakwunye, ụfọdụ ndị ọrụ na -ahọrọ ịrụ ọrụ oge niile n'ọfịs ebe ndị ọrụ ndị ọzọ na -achọ ịrụ ọrụ oge niile.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ oge nchegbu maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ụfọdụ ndị ọrụ na -abụghị ndị ahịa na -eche ihu na ndị enwere ike ịrụ ọrụ ha site na ebe ọ bụla na -ajụ arịrịọ ụlọ ọrụ.
Ndị ahịa ndị ọzọ na -eche ndị ọrụ nọ n'ọfịs n'oge ọrịa ahụ niile nwere ike bụrụ ikpe ma ọ bụ ịchụpụ ndị ọrụ nọ n'ime ime.
Mmụba nke nchekasị n'etiti ndị ọrụ niile bụ nkeonwe. Ọ bụrụ na onye ọrụ nwere nsogbu ahụike dị ugbu a ma rịọ ha ka ha laghachite n'ọfịs, ọ na -eme ka onye ọrụ ahụ jụọ nchekwa nchekwa ọrụ ya.
Anyị na -anụ akụkọ akụkọ sitere n'aka ndị isi na ndị ọrụ nke ụfọdụ ndị ọrụ na -atụgharịghachi ọrụ ha ma na -achọ ịchọta ọrụ nke dabara na ahụike onwe ha, kwekọrọ na nkwa ezinụlọ ha ma na -emezu.
O nwere ike ịbụ na ị nụla 'nnukwu arụkwaghịm' ebe Millenials na Gen Xers na -ahapụ ọrụ ha ugbu a ma ọ bụ na -akwụghị ụgwọ, na -amalite azụmahịa nke ha ma ọ bụ na -ahọrọ ịrụ ọrụ ebe ha nwere ike ịnọ oge zuru oke.
Enwere otu ụzọ isi kwụsịlata nchekasị n'ebe ọrụ ngwakọ bụ ihe ngwọta.
Agbanyeghị, dọọ aka na ntị, na ọ bụghị onye ndu ma ọ bụ onye ọrụ ọ bụla ga -achọta ngwọta a dị mfe ịme.
Ihe ngwọta ya bụ: ọmịiko.
N'ọnọdụ oke nrụgide mmadụ na -akpa agwa site na ụbụrụ oge mbụ ya (belụsọ na ọ zụlitere ike lelee mmeghachi omume ha ma zụlite nghọta nke onwe ha). Ntụgharị uche na ịgagharị okike bụ ụzọ abụọ iji nyere aka mee ka mmeghachi omume ụbụrụ oge ochie kwụsị.
Mgbe ọnọdụ ọhụrụ ma ọ bụ na -agbanwe agbanwe, mmeghachi omume mmadụ bụ 'ifriizi' ma ọ bụ 'ọgụ' ma ọ bụ 'ịgbapụ'.
Dabere n'ụdị mmadụ mmadụ nwere nzaghachi gbanyesiri mkpọrọgwụ ike maka nrụgide.
Mgbe mmadụ na -aza mmeghachi omume 'ifriizi' ọ ga -adị ka mgbada na ọkụ ọkụ, enweghị ike ịza arịrịọ ndị bụ isi, ga -ezere iso ndị mmadụ ịma aka ma ọ bụ ọnọdụ ịma aka.
Mgbe mmadụ zaghachiri na mmeghachi omume 'ọgụ' ọ na -alụ ọgụ n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ nke nwere ike ịbụ iwe iwe, mkparị, enweghị ndidi, ikpe na ịchụpụ ndị mmadụ. Ọtụtụ mgbe, onye 'na -alụ ọgụ' na -anwa ịchịkwa ọnọdụ ahụ ma ọ bụ onye ha chere na -akpatara ha nchegbu.
Mgbe mmadụ na -aza mmeghachi omume 'ụgbọ elu' ọ na -ama ndị mmadụ ma ọ bụ ọnọdụ nkịtị. Ọtụtụ mgbe a na -ezere nrụgide nke ọnọdụ ma ọ bụ onye ha chere na ọ na -akpatara ha nchegbu. Nke a bụ ebe ndị mmadụ nwere ike ha agaghị abịa ọrụ, nwere ike ọ gaghị aza arịrịọ kọntaktị ma nwee ike ịnabata ọrụ mana ha apụtaghị ụbọchị ha kwesịrị ịmalite.
Ịbụ ego nrụgide na onye isi na -eme nke ọma n'ebe ọrụ ngwakọ chọrọ ndị ndu nwere ike ịnyagharịa nzaghachi dị iche iche maka nrụgide na mgbanwe. Site n'iji ahụmịhe ọmịiko gị, ị nwere ike iwulite onwe gị dịka onye ndu ma n'otu oge ahụ nwee mmetụta iwulite ntụkwasị obi na nkwa siri ike karịa ndị otu gị.
Anaghị m ekwu maka ọmịiko dị ka echiche dịka ọ dị anyị niile mkpa ịghọtakwu ndị ọzọ.
Ana m ekwu maka ọmịiko n'omume.
Mkparịta ụka dị mkpa nwere ọmịiko
Usoro nchịkwa ọmịiko
Ọ bụrụ na enwere otu mmanya na -egbu egbu anyị niile enweela kemgbe oria ojoo a nke anyị na -atụ anya ka ndị mmadụ bụrụ 'ezigbo'.
Ndị ọrụ na -achọ ndị ndu nwere ike ịhụ mgbe ha na -echegbu ma ọ bụ na -adọga na ndị dị njikere ikwu maka ihe ịma aka yana igosi ọmịiko na nkwado.
Ndị ọrụ na -achọ ndị ndu nwere ike ị nweta azịza na onye nwere ike inye nkwado na akụrụngwa iji nyere ndị ọrụ aka imeri nsogbu ha.
Iji bụrụ ndị ndu nwere ọmịiko n'ezie yana ndị ọrụ niile kwesịrị iwulite ikike ha ịhụ ihe site n'ụzọ ndị ọzọ. Na mgbakwunye na ịhụ ihe site na echiche ndị ọzọ ọmịiko na -ajụzi ka ndị mmadụ si eme ma kwuo okwu site na nhọrọ maka nkwado.
N'oge na -adịbeghị anya, m na -eduzi oku onye nkuzi otu mebere na ndị na -ere ahịa nwere nkụda mmụọ na ndị otu ha na -arụ ọrụ. Otu ndị na -ere ahịa nọ n'ọfịs na ndị ahịa na -eche ihu - ndị otu na -arụ ọrụ na -arụ ọrụ ma ka na -arụ ọrụ n'ime ime.
Ihe mbụ anyị tụlere bụ nkụda mmụọ - anyị mepụtara oghere maka usoro 'ikuku'. Kama ịbelata usoro iku ume dị mkpụmkpụ ma ọ bụ ịga n'ihu na ngwọta ozugbo, anyị na -ekwe ka ikuku ahụ pụọ n'onwe ya. Ozugbo a nụrụ ka onye ọ bụla wee kwado ya na ọmịiko na ihe ịma aka ha siri ike, na ee, enwere ihe na -akụda mmụọ mgbe ahụ anyị gara n'ihu na -ekwu maka etu o si ele ọnọdụ ahụ anya site na arụmọrụ.
Ka ọ na -erule ngwụcha onye nkuzi otu a kpọrọ otu onye otu ndị na -ere ahịa kwuru, "Yabụ ihe m na -anụ bụ na anyị niile kwesịrị inwe ọmịiko karịa".
Otu ụzọ iji nyere aka wulite ọmịiko bụ ilekwasị anya n'ihe anyị na ndị ọzọ nwere kama ilekwasị anya n'ihe na -eme anyị nzuzu.
Maka ndị isi na ndị ọrụ ahụ na -eche na ha enweghị oge 'ikwu okwu', ma ọ bụ na ndị ọrụ kwesịrị ịgbasi ike, enwere m ike ikwe gị nkwa na n'ahịa ndị ọrụ taa, ị ga -atụfu ezigbo mmadụ gị.
Yabụ na enweghị mgbagha na anyị nọ n'oge ihe isi ike - amụma m bụ na ọnwa ole na ole sochirinụ ga -abụ nnukwu mmụta maka ndị ndu etu esi emepụta ngwakọ ngwakọ kacha dabara adaba maka ọnọdụ ha pụrụ iche. Ana m ebu amụma na ka ọ na -erule Jenụwarị 2022 n'ihi mmụta nke ọnwa ole na ole sochirinụ, a ga -elekwasị anya nke ukwuu n'ịkwado ndị mmadụ, na -enye ọzụzụ na nghọta miri emi banyere 'mmadụ' nke ndị ọrụ anyị ma mesịa rite uru na ụlọ ọrụ n'ozuzu ya site n'ilekwasị anya na 'ndị mmadụ mbụ'.
Debanye aha ugbu a ka ị gwa gị maka mbipụta akwụkwọ ọdịnihu
Biko họrọCanadaUnited StatesAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAntigua na BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia na HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic nkeCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGreenlandGrenadaGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJọdanKazakhstanKenyaKiribatiNorth KoreaSouth KoreaKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts na NevisSaint LuciaSaint Vincent na GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé na PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSudanSudan, SouthSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad na TobagoTunisiatoro toroTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USYemenZambiaZimbabwe
NextMapping ™ bu usoro aka anyi nke na - enyere ndi otu aka, ndi isi, ndi otu na ndi na - azụma ahia ka ebulite ikike ha ịgagharị n ’ọdịniihu na ịbụ ọdịnihu ọrụ dị ugbu a.
Ingba ume, ihe omuma ma nke ga - emekorita ihe ga - eme n ’akwukwo ozi edemede ahaziri ahazi gi.
Ọdịnihu ọhụụ nke nyocha ọrụ na data.
Gị na ụlọ ọrụ gị ọ dịla njikere? Were ajụjụ a dị nkenke chọpụta.
Ọdịnihu nke ọrụ ọmụmụ ọmụmụ ịntanetị
Nkuzi nke ntaneti site na nkwado onye nkuzi ighoro maka ndi ndu iji bulie ikike ha n’inwe idi njikere ugbua.
Ọ ga-amasị anyị ịnụ gị
Freekwụ ụgwọ n'efu: 1.833.NXTMAPP
Jikọọ na anyị na-elekọta mmadụ
© Copyright Cheryl Cran 2021 | amụma nzuzo